February 17, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha February 17, 2020
(London) 18 Feb 2020. Manchester United ayaa guul dahabi ah garoonka Stamford Bridge kaga soo gaartay kooxda Chelsea, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester United. Daqiiqadii 45-aad Manchester United ayaa hoggaanka u […]Sii akhriso
(London) 17 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa eegeysa inay wadada guusha Premier League dib ugu soo laabato marka ay caawa oo Isniin ah u safrayaan garoonka Stamford Bridge, halkaasoo ay ku wajahaan Chelsea. Red Devils ayaa dhibco lumisay waxaana ay fadhisaa kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League kaddib markii ay hal […]Sii akhriso
(London) 17 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa naadiga Manchester United ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Stamford Bridge kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Chelsea iyo Manchester United. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo dhammaystiran:- Chelsea Sii akhriso
(Liverpool) 15 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa magacowday 21-keeda ciyaaryahan ee u safreysa caasimada Madrid, si ay kaga qeyb galaan kulanka habeen dambe ay la ciyaarayaan Atletico Madrid. Garoonka Wanda Metropolitano ayaa habeen dambe oo khamiis ah marti galin doono kulanka la wada sugayo ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Atletico Madrid iyo Liverpool, Sii akhriso
(Spain) 17 Feb 2020. Celta Vigo ayaa taako u dhigtay kooxda Real Madrid oo ay xalay marti ugu noqotay garoonka Bernabeu, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Xiddiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Eden Hazard ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay […]Sii akhriso
News Ethiopia: Vendor killed, musician injured after police attack opposition supporters in Oromia – Amnesty International
Ethiopia News February 17, 2020
News Ethiopia: Vendor killed, musician injured after police attack opposition supporters in Oromia Amnesty InternationalSii akhriso
(Manchester) 17 Feb 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Man United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in haddii ay Red Devils ku guuldarreysato inay u soo baxdo tartanka UEFA Champions League aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin heshiisyada ay United-ka ku dooneyso ciyaartoy cajiib ah. Manchester United ayaa haatan ku jirta kaalinta sagaalaad iyadoo leh […]Sii akhriso
Ethiopia’s naive peacemaking could lead to war – Washington Examiner
Ethiopia’s naive peacemaking could lead to war Washington ExaminerSii akhriso
Xarunta kaydka dhiiga oo bilowdey in ay si bilaash ah ku bixiso dhiiga.
DDS February 17, 2020
Xafiiska caafimaadka DDS ayaa si rasmi ah u shaaciyay in hada wixii ka danbeeya uu keydka dhiiga ( Bangiga Dhiiga) ee magaalada Jigjiga si bilaash ah bulshada u baahan uu ku siin doono dhiiga ka dib 3dii bilood ee la soo dhafey oo xafiiska uu waday qorshahan, arintaas oo mudadaas ay si tijaabo ah ku […]Sii akhriso
(Paris) 17 Feb 2020. Neymar & Mbappe ayaa hoggaaminaya liiska xiddigaha kooxda PSG ee kulanka Champions League uga qeyb galaya ciyaarta Dortmund. Kooxda kubadda cagta PSG ayaa ku dhawaaqday 21-ka ciyaaryahan ee ay ku wajahayaan Dortmund kulankooda Champions League ee isbuucaan, iyadoo ay ku jiraan Neymar & Mbappe, waxaana ka maqan Paredes. Though Tuchel ayaa […]Sii akhriso